Lululook Apple Watch Kiiska Qaadista Suunka | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah waxyaalaha ku dhaca kuweenna "geeks" ka ah beddel xargaha Apple Watch-kayga si joogto ah waa marka markaan sidoo kale ka dhaqaaqno meel kale aan u dhigno waa inaan dhignaa dhamaan xargaha ama kuwa aan dooneyno inaan safar ku galno gees ka mid ah boorsada, shandada ama wixii lamid ah.
Xaaladdan oo kale saxiixa caanka ah Lululook wuxuu na siiyaa ikhtiyaar raqiis ah oo tayo leh si aan u qaadno ama u kaydinno ilaa 6 xarkaha kiis macquul ahaan aan ka sameysneyn maqaar laakiin in si buuxda u gutaan shaqadiisa.
Waxaad ka iibsan kartaa kiiskan kaydinta suunka Lululook halkan
Kudar jiinyeer leh laba gaari si aad si buuxda u furto oo aad uhesho suunka aan dooneyno ilbiriqsi, sidoo kale ku dar qeyb banaanka ah halka aan ku keydin karno dukumiinti ama wax lamid ah. Gudaha dhexdiisa ayaa runtii la ilaaliyaa oo waxaan arki doonaa inaan keydin karno xitaa waxyaabo badan mahadsanid laba qaybood oo uu ku daro xagga sare gudaha.
Fiilooyinka Apple Watch ee iska leh, qaar ka mid ah AirPods Pro, samaacadahaaga, qalab lagu hagaajinayo xarkaha ama qalab kasta oo la xiriira saacadda Apple. Runtu waxay tahay in daboolkani waxtar yeelan karo xitaa in saacadda lafteeda la kaydiyo, in kastoo aan lagugula talin maadama aysan kudarsanaynin wax xirnaansho gudaha ah ama wax lamid ah ayna garaaci karto gudaha haddii ay ka soo baxdo jeebka laftiisa.
1 Cabirradu waa qayb muhiim u ah kiiskan
2 Qiimaha kiiskan Lululook
Cabirradu waa qayb muhiim u ah kiiskan
Waana in kastoo aysan aad ugu weyneyn wadarta cabbiraadaha, haddana waa muhiim in xargaha si wanaagsan loogu ilaaliyo gudaha. Sababtaas awgeed, xaaladdan, kala-qaybiyayaashu waxay leeyihiin meel loogu talagalay dhammaan noocyada xarkaha oo haddii aad leedahay dhowr waxaad xitaa ku dari kartaa xul iyaga ka mid ah, iyaga oo ku kala soocaya qalab. Kuwa silikoonka, kuwa maqaarka ah iyo wixii la mid ah, kuwa kaliya ee aanan isku soo wada xoori doonin waxay noqon doonaan kuwa birta ah maaddaama aysan jirin meel u dhaxeysa iyaga ay waxyeello gaari karaan.
Xaaladdan oo kale, kiisku wuxuu leeyahay cabirrada 22 x 17 x 5 cm waxayna leedahay culeys waddo oo dhan 372g. Tan waxaa si ammaan ah loogu qaadi karaa shandad ama boorsada dhabarka, sida haddii ay tahay bacda musqusha. Xaqiiqdii waa waxqabad xitaa in lagu keydiyo xargaha guriga, sidaa darteed iskama qasmayaan waxaadna markasta si fudud uheli kartaa kan aad rabto inaad saacaddaada dhigato.
Qiimaha kiiskan Lululook
Shaki la'aan waa mid ka mid ah wanaagga wanaagsan ee shirkaddan, qiimaheeda. Caqli ahaan kama hadleyno shey maqaar ah (in kasta oo ay si fiican u ekeysiineyso) iyo lacag dhameystir ah, laakiin runtii inaan keydinno xargahayagu way ka badan yihiin intaas.
Qiimahaaga hadda Websaydhka Lululook waa $ 34,99 waxayna leedahay a 30% dhimis qiimaha caadiga ah. Qalab qalab ah oo shaki la'aan noqon kara mid waxtar weyn u leh qaar badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha oo keydiya dhowr xargo oo qaarkood ay ka tayo sarreeyaan ama xitaa la safraan xargaha si wanaagsan loo keydiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Lululook Apple Watch Suunka Qaadista
Photoshop hadda waxay taageertaa processor-ka Apple ee M1